Isixhobo sokukhupha i-acidic esizenzekelayo sisekwe kwindlela yokutsala okuzenzekelayo yokwahlulwa kwe-magnetic bead adsorption, enokuthi yoyise kakuhle ukusilela kwendlela yokukhupha i-acid ye-acid, kwaye ikhawuleze ilungiselele ngokukhawuleza nangokufanelekileyo iisampulu ze-1-96 ngexesha. Nge-reagent ehambelana ne-acid ye-acid, inokuqhubekeka ngeentlobo zeesampulu ezinje nge-serum, iplasma, igazi liphela, iswabi, isitulo, izicwili, icandelo leparafini, ibhaktiriya, isikhunta, njl.nokusetyenziswa kuthintelo lwezifo kunye nolawulo, ukuvalelwa kwesilwanyana ngokwahlukeneyo, ukuxilongwa kwezonyango, ukuhlolwa kokuphuma kunye nokuvalelwa komntu yedwa, ukulawulwa kokutya kunye neziyobisi, amayeza onyango, ukufundisa kunye nophando lwenzululwazi kunye neminye imimandla.
Ukusebenza okuphezulu: ibha egcweleyo yemagnethi kunye nokulungiswa kwetekhnoloji yokulungiswa kwe-amplitude, inokujongana ngokulula nazo zonke iintlobo zamaso amancinci amancinci, ukufezekisa ngokulula ukukhutshwa kwe-acid ye-acid ngaphandle kokuxhoma udonga lwentsalela.
Ukhuseleko: ukusetyenziswa kwesitshixo sexesha elinye sokukhupha kunye nesibane sokubulala iintsholongwane kunokuthintela ungcoliseko lweerosol kwiibhetshi ezahlukeneyo kunye nokunciphisa umngcipheko wokusebenza.
Okrelekrele: Uyilo lwe-UI yokulawula ipaneli yokulawula i-cockpit, inokuba ngumboniso wexesha elinye weeparameter zokusebenza, ekulula ukuyiqonda nokusebenza kwayo.
Ukumiswa komgangatho: iinkqubo ezininzi ezisebenzayo zinokuhlelwa ngokweemfuno, kwaye zinendawo yokugcina enkulu ukuqinisekisa ubunye beemeko zovavanyo.
Ukusebenza okuzenzekelayo, okuphezulu okuphezulu: i-nucleic acid yokufunxa into yokuzenzekelayo, ukusetyenzwa kwangexesha elinye kweesampulu eziyi-1-96, ukuqhubekeka kwesantya seasidi ye-acid ngamaxesha angama-4-5 okukhutshwa ngesandla
Izinto ezixhasa ukunceda
Ukuvulwa kwempendulo: Ngaphandle kweCorbition reagent yonyango, iyakwazi ukuphatha zonke iintlobo zeekitshi zokucoca i-acid bead nucleic kwimarike
Iinkcukacha I-CBX32 yeNucleic Acid Extractor
Amandla eSampula 1-32
Umthamo weSampula 50-1000 uL
Isixa somthamo > 95%
Ixesha Lokukhupha Imizuzu engama-30 ~ 60
Uluhlu lwamaqondo obushushu 25 ukuya ku-50 ℃
Uhlobo lwePlate Ipleyiti enzulu engama-96
Uhlobo lweReagent Vula iqonga
Ubushushu obuSebenzayo I-CV <= 3%
Ulawulo loqhubekeko Isakhiwo esitsha, ukuhlela, ukucima
Iqhubekekisa Inombolo Yokugcina Ukulungiswa kwesakhiwo, iiseti ezingama-20 zokuhlelwa kwabathengi
UV Izibane Ewe
Imilinganiselo 400 * 420 * 440mm
Ukunikezwa Amandla AC 110V-240V, 50Hz / 60Hz, 750W
Iinkcukacha Isikhupheli se-Acid yeNyukliya
Amandla eSampula 1-33
Okulandelayo: 16 RT-PCR
I-CBX32 yeNucleic Acid Extractor
I-CBX48 yeNucleic Acid Extractor Isicatshulwa se-Nucleic acid